DAAWO: Madaxweyne Deni oo indhaha ka qabsadey kiiskii Caasho Ilyees. – Kismaayo24 News Agency
by admin 9th January 2020 0153
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni oo wariyaashu weydiiyeeen su’aalo dhowr ah ayaa jawaabay sababta uu u saxiixi waayey fulinta xukunkii dilka ahaa lagu riday saddexdii nin ee lagu helay kiiskii Caasha Ilyaas Aadan oo ahayd gabadh yar oo lagu kufsaday laguna dilay Gaalkacyo.
Saciid Denni ayaa sidoo kale sheegay in fulinta xukunada ay ridaan maxkamadaha Puntland aysan wax door ah uga furnayn madaxweynaha iyo xukuumaddiisa balse ay go’aanka kama dambaysta ah gaadho maxkamadda sare ee Puntland.
Waxa uu sheegay in xukuumaddu aysan marnaba fara geli karin arrimaha Garsoorka sidaasi darteedna aysan meelna kasoo gelin xukunada ay ridaan Maxkamaduhu, kuwaas oo sida uu xusay ku dhamaada go’aanka ugu dambeeya ee maxkamadda sare.
Hadalka kasoo yeedhay madaxweyne Denni ayaa u muuqdaa mid uu indhaha kaga qabsanayo kiiskii marxuumad Caasha Ilyaas oo ku xidhan saxiixiisa, waxaana qoyskeedu ay dalbanayaan Cadaalad taas oo aysan helin weli.
Daawo: Shiikh Cali Dheere iyo Horjoogayaal Alshabaab ah oo Muqdisho lagu arkay
Sawiiro:-Waraaqaha aqoonsiga safiirnimo oo laga gudoomay safiirka dowladda Japan u soo magacaabatay Soomaaliya